Waxyaabaha iyo Waxyaabaha Jecel Blog Suuqgeynta | Martech Zone
Sabtida, Janaayo 16, 2010 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Blogs Suuqgeyntu waxay ku jiraan jadwalkayga maalinlaha ah. Waxaan la socdaa bloggers-yada suuqgeynta ee Twitter-ka waxaanan leeyahay aqristaheyga akhriska (oo aanan weligey la socon). Waxaan badanaa aqriyaa baloog waxaanan joojiyaa dhowr maalmood gudahood sababo laxiriira, kuwa kale oo aan aqriyay sanado.
Ma aaminsani inaanay jirin hal bog oo blog ah oo suuq geyn ku sameeyaa internetka. Daacad baan noqon doonaa oo waxaan kuu sheegayaa taas, in kasta oo aan aad u ixtiraamo buugaagta Seth Godin, haddana ma ihi mid taageersan boggiisa gebi ahaanba. Waxaan horey u sii dalbaday buugga cusub ee Seth, Linchpin: Adigu Ma Lihi Karaa?,… Laakiin inta badan ma booqdo bartiisa. Seth wuxuu inta badan tuuraa bambooyin maalin kasta oo mudan in laga wada hadlo - laakiin bilaa faallooyin, ma jirto fursad lagu falanqeeyo.
Waan ku faraxsanahay kala duwanaanta akhriska baloogyada suuqgeynta badan ay bixiyaan. Suuqgeyntu waa mawduuc aad u kala duwan oo laftiisa ah, oo ka soo jeeda warbaahinta caadiga ah, si loo baahiyo, loo sumad shaqsiyeed iyo warbaahin cusub. Suuqgeyntu sidoo kale waxay ku lug leedahay ganacsiga guud, iibka, iyo xeeladaha xayeysiinta.
My Blog Blog Jeclahay
Haddii aad leedahay baloog suuq geyn ah, waa inaad labadiinuba ku celcelisaan waxaad ku wacdinaysaan oo aad natiijooyinka wadaagaan.
Haddii aad ku wargelineyso akhristayaashaada ku saabsan tirakoobka warshadaha, hubi inaad raadiso caddeyn lid ku ah. Xogta badanaa waxaa lagu soo bandhigaa cuqdad.
Boodhadhka suuqgeynta waa inay bixiyaan qalabka iyo tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah suuqleyda inay fuliyaan ololeyaal isku mid ah.
Bogagga suuqgeynta waa inay codsadaan faallooyin iyo jawaab oo ay siiyaan aragtiyadaas iftiinka tooska ah… xitaa u oggolaanaya kuwa aan ku raacsaneyn fursadda inay martida ku soo diraan.
My Blog Blog Neceb yahay
Xayeysiisyada suuqgeynta ee kaliya fiirsada, ka faallooda iyo gudbinta macluumaadka - waligood ha siinin gacmaha khibrad ay dhammaan baloogyadu bixiyaan.
Bloggers ku xayeysiinta waa inay xiraan boosteejo kasta iyagoo aqoonsanaya inay la wadaageen nooc ka mid ah macluumaadka waxtarka leh a suuqgeeye… Maahan kaliya akhristaha celceliska.
Baloogyada suuqgeynta waa inaysan ka hadlin suuqleyda, waa inay ku saabsan yihiin macaamilka, hannaanka, aaladaha, taatikada iyo natiijooyinka.
Xaga wada shaqeynta, waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inuu jiro farqi u dhexeeya Suuqgeynta Internetka ama Suuqgeynta Heerarka Badan (MLM) iyo boggaga Suuqgeynta Internetka. In kasta oo aan ixtiraamayo qaar ka mid ah istiraatiijiyaddii ay geysteen Suuqleyda Heerarka Badan, shirkadda caadiga ah ee uu la socdo agaasimaha suuqgeynta weligood si la mid ah ugama qayb geli karaan rajadooda. Waxaan jeclaan lahaa Blogs Suuq geynta inay si cad isu kala soocaan.
Astaamahee ayaad ku aragtaa inaad ku hawlan tahay Blog Suuq geyn ah? Astaamo noocee ah ayaa kugu kalifaya inaad ka tagto? Mawduucyo noocee ah ayaad jeceshahay inaan waxbadan ka soo qaadno? Ka faallo qoraalkan ama isticmaal tabta Jawaab celinta ee dhinaca bidix.